Mahiga oo la kulmay Madaxweynaha Puntland - BBC Somali
Mahiga oo la kulmay Madaxweynaha Puntland
Axmed Maxamed Cali BBC Garoowe
10 Nofembar 2010
Image caption Ergayga gaarka ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay iyo Madaxweynaha Puntland
Wakiilka Xogyaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Somaliya Ambasador Augustine Mahiga ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Garowe halkaas oo kula kulmay madaxwaynaha Puntland Cabdiraxman Sh.Max'ed iyo xubno ka tirsan golaha wasiirrada.
Madaxwaynaha iyo wakiilka oo kulankooda ka dib warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inay ka wada hadleen arrimo la xiriira xaaladda Soomaaliya, dhibaatooyinka ka taagan iyo sidii xal loogu heli lahaa taas oo ay barbar socoto qodobbo kale oo iyagana ku saabsan Puntland iyo qaramada midoobay.
Booqashada wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay uu ku yimi Puntland waxay ahayd mid la sugayay maalmihii la soo dhaafay waxana markii uu yimi Garowe lagu soo dhoweeyay xarunta madaxtooyada ee Garowe halkaas oo uu kula kulmay Madaxwaynaha Puntland iyo madax kale oo dawladda ka tirsan.
Madaxwaynaha Puntland iyo safiirka oo kulankoodi ka dib warbaahinta la hadlay waxay wadajir u tibaaxeen inay si qoto dheer uga isula soo qaadeen arrimaha ka taagan guud ahaan Somaaliya , xiriirka dawladda federalka ee Somaliya iyo Puntland iyo arrimo kale oo iyana khuseeya gudaha Puntland.
Si gaara waxaa farta loogu fiiqay dhinaca la dagaallanka burcad-badeedka iyo dhinaca horumarinta dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxayna sheegeen labada masuul in loo baahan yahay taakulo caalamku ka gayasto arrimaha gacanta u baahan ee horumarka Puntland la xiriira.
Ambasador Mahiga, oo isagana su'aalo laga waydiyay ujeedada booqashada uu ku yimi Puntland iyo waxa uu ka kororsaday socdaalkiisa ayaa tilmaamay in booqashadiisu ay salka ku hayso arrimo kala duwan oo isugu jira guud ahaan xaaladda Soomaaliya iyo tan gaar ahaaneed ee Puntland. Wuxuu yiri: waxan u imi Puntland inaan arko dawladda Puntland dhamaan dhinacyada kala duwan ee dawladnimada, horumarka dhaqaalaha, iyo hormarka dhinaca nabadgelyada.
Waxan kaloo halkan u imi inaan dhiirrigeliyo hoggaaminta, Puntland waxay duraba samaysay awood ay taas kaga qayb qaadato waxana filayaa inaan u baahanahay inaan cayaaro kaalintayda si aan dareenka caalamka ugu soo jeediyo Puntland oo ah meel ay suuragal tahay in guul laga dhaliyo guushaas oo ah mid ay ku dayan karaan Soomaaliya inteeda kale. Wakiilka xogyaha guud ee qaramada midoobay ambassador Mahiga wuxuu kaloo tilmaamay in Puntland ay meesha ka saartay sawir ay ka haystaan dad badan isla markaasna ay muujisay in dad Soomaali ahi ay ku tallaabsan karaan dhismaha maamul ku dhisan sharci iyo kala dambayn la isku hallayn karo.
Safiirku wuxuu soo qaaday dagaalkii dhowaan ka dhacay degaanka Galgala oo uu ku tilmaamay ka qaybgal buuxa oo uu maamulku ka gaystay dagaalka caalamiga ah ee lagula jiro waxa uu ugu yeeray argigixisada caalamiga.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay Mahiga in Puntland ay kaalin muuqata kaga jirto dadaalka loogu jiro joojinta burcad-badeedka isla markaasna ay jiraan maraakiib fara badan oo ka soo jeeda dalalka waawayn kuwaas oo ilaalo ka haya badaha Somaliya ku xeeran.
Hase ahaatee wuxuu sheegay safiirku Mahiga baahida loo qabo in caalamku ogaado in burcad-badeedku ay saldhigyada ay ka hawlgalaan ay ku yaallaan xagga berriga sidaa awgeedna caalamka looga fadhiyo inuu gacan ka gaysto sidii Puntland looga caawin lahaa ka hortagga burcad-badeedka gaar ahaana dhinaca berriga.
Wuxu intaas ku daray inuu gudaha Puntland u soo rari doono xafiiska qaramada midoobay ee siyaasada Soomaaliya iyo dhamaan shaqaalaha ajnabiga iyo kuwa Soomaalida ah ee ka hawlgala xafiiskaas taas oo uu sheegay in maamulka Puntland uu ku mutaystay xasilloonida iyo amaanka uu xaqiijiyay.
Safiirka oo ka hadlay dhinaca horumarinta kaabayaasha dhaqaale iyo arrimaha bulshada wuxuu carrab-baabay inuu dabagal ku samayn doono go'aanadii ka soo baxay shirkii Stanbul si loo meel mariyo dhaqangelinta waxqabadkii loogu yaboohay Soomaaliya guud ahaan gaar ahaana Puntland.